म बाहेक कसैले भारतबि’रुद्ध बोल्न सक्दैन, गुमेको भूमी फिर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिन्छु : ओली – iNews16
म बाहेक कसैले भारतबि’रुद्ध बोल्न सक्दैन, गुमेको भूमी फिर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिन्छु : ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनको प्रयास जति भए पनि हिजोको जस्तै आजको भोलि परिवर्तन हुनै नसक्ने बताएका छन्। मदन जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नेताहरुलाई बन्‍न हतार नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। पार्टी भित्रै चर्को आ’लोच’ना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो धारणा आएको हो।प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्‍न मन नभएपछि अहिले नेपालको पक्षमा बोल्ने हिम्मत भएको व्यक्ति नभएकाले आफ्नो आवश्यकता रहेको आशय उनले व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्‍न मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैलाई आउने छैन’, उनले भने, किनभने भोलीपल्ट ब’र्खास्त हुन्छ। त्यसैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि। आफ्ना लागि देशका लागि। र हाम्रो पार्टी हाम्रो संसदीय दल यस्ता बहकाउमा लाग्‍नेवाला पनि छैन। नबुझ्ने अञ्जन खेलमा सामेल हुने पनि छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र ५८ वर्षदेखि खोसिएकाले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् । ६९ औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो जमिन खोसिएको छ, फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर नेपालले कुनै ग’ल्ती नगरेको बताए ।
तपाईंले सुन्नुभएको होला हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ, गरिन्छ । भारतीय मिडियाको बहस, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूको कुराकानी सुन्नुभएको होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र, अचम्मसँग सक्रिय छ । ल’डाइँमा हामीले हार्‍यौं । हाम्रो सीमा अलि खुम्चियो । हामीले १८२६ को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गर्‍यौं, त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौं, उनले भने ।
नेपालका नेताहरू पनि बहसमा लागेको भन्दै आश्चर्यचकित भए । तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू उता (लिम्पियाधुरा क्षेत्र, कुटी, नाभी, गुञ्जी) जनसंख्यासँग हाम्रो पहुँच कटेको छ । १९६२ देखि सेना राखेर उता जानै दिएको छैन । त्यहाँका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन । उताका जनताका लागि केही गर्नै दिएको छैन । नागरिकता कसको छ ? रासनकार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्,उनले भने ।
खल्तीमा नागरिकता नेपाली, तर्क अरूको पक्षबाट गरिरहेको छ भन्दै ‌ओली आश्चर्य पनि व्यक्त गरे । १९६२ बाट सेना राखेपछि कसरी उताका नागरिकसँग हाम्रो पहुँच स्थापित हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।
Previous ओलीले भने -म भन्दा उत्कृष्ट नेता आऊन्, अहिल्यै छाडिदिन्छु !
Next अब बुढा बुढा नेता नलडौँ, म पद छाड्न तयार छु तर सरकार चलाउन युवाहरुलाई दिऔं – ओली
By user user 46 mins ago
By user user 57 mins ago
By user user 59 mins ago